Sirta ka dambeysa ciidamada cusub ee la geeyay Beled Xaawo (SAWIRRO) | Dhacdo
Dowladda Somaliya ayaa maanta markale ciidamo cusub gaysay Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo. Ciidamadan ayaana ka yimid dhanka Degmada Doolow.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka tirsan yihiin ciidamadii shalay iyo doraad ka degay Garoonka Diyaaradaha ee Degmada Doolow, ee laga keenay dhanka Magaalada Muqdisho, qaarkoodna ay shalay gaareen Degmada Beled Xaawo.
Ciidamadan oo isugu jira Nabadsuggid iyo Militari ayaa maanta Beled Xaawo soo gaaray, iyagoo wata gaadiidka dagaalka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamadan ay suurtagal tahay inay u dhaqaaqaan dhanka Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, halkaasoo la soo sheegaya in Kenya ay ka waddo dhismaha darbiga ay xuduudda ka dhiseyso.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Universaltv u sheegay in Dowladda Somaliya ay si dhow ula socoto ciidamo uu sheegay in Kenya ku soo daadisay xadka labada dal, gaar ahaan aagga ay dhismaha darbiga ka waddo.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ayaa meeshii ugu hooseysay gaaray, shantii bilood ee ugu dambeysay.